2 Samuweli 21 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Samuweli 21:1-22
21 Ke kaloku kwabakho indlala+ ngemihla kaDavide kangangeminyaka emithathu, unyaka ngonyaka; waza uDavide wabuza ebusweni bukaYehova. Wandula ke uYehova wathi: “Kukho ityala legazi phezu koSawule naphezu kwendlu yakhe, ngenxa yokuba wawabulala amaGibheyon.”+ 2 Ngoko ukumkani wawabiza amaGibheyon+ waza wathetha kuwo. (AmaGibheyon ayengengabo oonyana bakaSirayeli, kodwa ngabasalayo kuma-Amori;+ yaye oonyana bakaSirayeli babefungile kuwo,+ kodwa uSawule wafuna ukuwaxabela+ ngenxa yokuziva enekhwele+ ngoonyana bakaSirayeli noYuda.) 3 UDavide wathi kumaGibheyon: “Ndiya kwenza ntoni na kuni, yaye ndiya kucamagusha ngantoni na,+ ukuze ngokuqinisekileyo nilisikelele ilifa+ likaYehova?” 4 Ngoko amaGibheyon athi kuye: “Imbambano yethu noSawule nendlu yakhe, asiyosilivere okanye igolide,+ ingekokwethu nokubulala umntu kwaSirayeli.” Yena wathi: “Nakuphi na oko nikutshoyo ndiya kunenzela kona.” 5 Bathi ke kukumkani: “Indoda eyasitshabalalisayo+ neyaceba+ ukusibhubhisa ukuba singaphili kuwo nawuphi na ummandla kwaSirayeli, 6 makunikelwe kuthi amadoda asixhenxe koonyana bayo;+ yaye simele siwabhencise+ kuYehova eGibheya+ yakwaSawule, onyuliweyo kaYehova.”+ Ngako oko ukumkani wathi: “Ndiya kuwanikela ngokwam.” 7 Noko ke, ukumkani waba nemfesane kuMefibhoshete+ unyana kaYonatan unyana kaSawule ngenxa yesifungo+ sikaYehova esasiphakathi kwabo, phakathi koDavide noYonatan unyana kaSawule. 8 Ngenxa yoko ukumkani wathabatha oonyana ababini bakaRitspa+ intombi ka-Aya awabazalela uSawule, uArmoni noMefibhoshete, noonyana abahlanu bakaMikali+ intombi kaSawule awabazalela uAdriyeli+ unyana kaBharzilayi umMehola. 9 Wandula ke wabanikela esandleni samaGibheyon kwaye wona ababhencisa entabeni phambi koYehova,+ ngokokuze bosixhenxe bawe ndawonye; yaye bona babulawa ngeemini zokuqala zesivuno, ekuqaleni kwesivuno serhasi.+ 10 Noko ke, uRitspa intombi ka-Aya+ wathabatha irhonya+ waza wazanekela lona eliweni ukususela ekuqaleni kokuvuna kwada kwagaleleka amanzi phezu kwabo evela emazulwini;+ yaye wayengazivumeli iintaka+ zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini namarhamncwa asendle+ ngobusuku. 11 Ekugqibeleni kwaxelwa+ kuDavide oko wakwenzayo uRitspa intombi ka-Aya, ishweshwe likaSawule. 12 Ngoko uDavide wahamba waya kuwathabatha amathambo kaSawule+ namathambo kaYonatan unyana wakhe kubanini-mhlaba baseYabheshe-giliyadi,+ ababewabile kwindawo yembutho yaseBhete-shan,+ apho amaFilisti ayebaxhome+ khona mini amaFilisti amxabelayo uSawule eGilbhowa.+ 13 Wawanyusa ewasusa apho amathambo kaSawule namathambo kaYonatan unyana wakhe; ngokubhekele phaya, bawahlanganisa amathambo amadoda awayebhencisiwe.+ 14 Bandula ke bawangcwaba amathambo kaSawule nakaYonatan unyana wakhe kwilizwe lakwaBhenjamin eTsela+ kwindawo yokungcwaba kaKishe+ uyise, ukuze benze yonk’ into awayeyiyalele ukumkani. Ngoko uThixo wasabela akubongozwa ngenxa yelizwe emva koku.+ 15 AmaFilisti+ alwa imfazwe noSirayeli kwakhona. Ngako oko uDavide nabakhonzi bakhe behla baza balwa namaFilisti; yaye wadinwa uDavide. 16 Kwaye uIshbhi-bhenobhi, owayephakathi kwabo bazalwa ngamaRefa,+ obunzima bomkhonto+ wakhe babuziishekele ezingamakhulu amathathu zobhedu nowayebhinqe ikrele elitsha, wacinga ngokuxabela uDavide. 17 Kwaoko uAbhishayi+ unyana kaTseruya weza kumnceda,+ wamxabela umFilisti waza wambulala. Ngelo xesha amadoda akwaDavide afunga kuye, esithi: “Ungahambi nathi ukuya edabini kwakhona,+ ukuze ungasicimi+ isibane+ sakwaSirayeli!” 18 Kwathi emva koku kwaphinda kwabakho imfazwe namaFilisti eGobhi. Apho ke uSibhekayi+ umHusha+ waxabela uSafu, owayephakathi kwabo bazalwa ngamaRefa.+ 19 Kwaphinda ke kwabakho imfazwe namaFilisti eGobhi, yaye uElihanan+ unyana kaYahare-oregim waseBhetelehem waxabela uGoliyati umGati, omphini womkhonto wakhe wawunjengomqobo wabaluki.+ 20 Kwabakho ke imfazwe kwakhona eGati,+ apho kwakukho indoda enkulu ngokungaqhelekanga, ineminwe emithandathu esandleni ngasinye neenzwane ezintandathu elunyaweni ngalunye, amashumi amabini anesine ngenani; nayo yayizalwa ngamaRefa.+ 21 Yaye yaqhubeka imngcikiva+ uSirayeli. Ekugqibeleni uYonatan+ unyana kaShimeyi,+ umntakwabo Davide, wayixabela. 22 Aba bobane babezalwa ngamaRefa eGati;+ yaye bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sabakhonzi bakhe.+
2 Samuweli 21